I-Mailtrack: Ukulandelela iGmail yakho ivula usebenzisa le Chrome Iplagi | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 3, 2014 NgoLwesine, Novemba 6, 2014 Douglas Karr
Ngaba wakha wazibuza ukuba okanye hayi umntu uvule i-imeyile oyithumele usebenzisa i-Gmail? Ungasebenzisa I-Mailtrack ukwenza kanye loo nto. I-Mailtrack yiplagi yeChannel eyongeza ipikseli yokulandelela kumyalezo wakho ophumayo. Xa umamkeli wakho evula i-imeyile, umfanekiso uyacelwa kwaye iMailtrack irejista evulekileyo, ebonisa ukuba ibonwe ngophawu lokujonga kujongano lwakho lweGmail.
Esi sisixhobo esilula, esisebenzayo kwaye ndinqwenela ukuba bonke abathengi be-imeyile bangasifaka kwiqonga labo. Phantse zonke ii-imeyile zithunyelwa kwaye zibonwe kwifomathi ye-HTML kule mihla, sisisombululo esisebenzayo. Ukuba umthengi usebenzisa i-Outlook, ihlala ibhloka kwaye ayisihlisi imifanekiso ngokungagqibekanga ukuze ungabhalisi indawo evulekileyo nokuba kukho umntu oyenzileyo.
I-Mailtrack ine-interface elula ukubona ukuba zeziphi ii-imeyile ezivulekileyo kwaye zafundwa.
I-Gmail kufuneka ithenge le app kwaba bantu kwaye iyidibanise kwiqonga labo kunye ne API indlela oza kuyisebenzisa nabaxumi. Umxhasi we-imeyile ngaphandle kwesiKhangeli se-Chrome akazukudibanisa ipikseli yokulandela umkhondo.
tags: inboxImeyile yeapps zikaGooglemailtrackukulandelela i-imeyile kuvulatrack iyavulaIipikseli zokulandela umkhondo
Jan 17, 2017 kwi-9: 12 AM
Olu lulwandiso olupholileyo, kodwa andizithandi iintengiso ezikwinguqulelo yasimahla. Kukho enye indlela ngaphandle kwazo naziphi na iintengiso- https://deskun.com/, yijonge.